နှလုံးရောဂါရှိမရှိ ကြိုတင်သိစေနိုင်သော အချက်များ
Smoking may cause heart disease. Artist rendition of new cigarette warnings proposed by US FDA contain graphic images, 2019. (Photo Courtesy of U.S. FDA)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး၊ နှလုံးရောဂါ ရှိ၊ မရှိ၊ ကြိုတင် သိချင်သူတွေ များလာနေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာနက်တွေကတဆင့် နှလုံးရောဂါဆိုင်ရာ အသိဉာဏ် ပိုတိုးလာချိန်မှာ၊ ဒီရောဂါ ရှိ၊မရှိနဲ့၊ ရှိလာလျှင်လည်း စောစောသိ စောစောကုသချင်သူတွေ များလာနေပါတယ်။ ဆေးရုံတွေဘက်လည်း နှလုံးရောဂါ စတင်အခြေခံလာနိုင်တဲ့ မွေးကင်းစအရွယ်ကစပြီး စစ်ဆေးပေးတာတွေ ပိုလုပ်လာနေပေမယ့်၊ လွတ်သွားတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ် ရလာချိန်မှာတော့၊ မိမိ အနားက လူတွေနှလုံးရောဂါ ဖြစ်လာချိန်မှာ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ရှိမရှိ စိုးရိမ်တာကြောင့်၊ နှလုံးရောဂါ ရှိမရှိ ဆရာဝန်တွေကို ပိုမေးလာနေပါတယ်။
ပထမ သတိပြုရမှာက နှလုံးရောဂါ ဆက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုနဲ့ လေးဘက်နာရောဂါ အခံရှိထားသူတွေမှာ နှလုံးရောဂါ ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးဖို့ အရေးကြီးတာပါ။ သွေးတိုးရောဂါရှိလာချိန်မှာ နှလုံးကို ဒဏ်ပိပြီး၊ နှလုံးကြီးလာကာ၊ နှလုံညှစ်အားကျပြီး၊ နှလုံးအားပြတ်ရောဂါ (Left Ventricular Failure) ဖြစ်လာနိုင်ကာ၊ ကြိုမသိထားရင် နှလုံးဆို့ကြပ်ချိန် ဆေးရုံပို့ရမှ နောက်ကျပြီး သိတတ်ကြပါတယ်။ အဖြစ်များလာတဲ့ ဆီးချိုကလည်း ဆီးနဲ့ပတ်သက်သလိုဖြစ်ပေမယ့် အဓိက သွေးကြောမကြီးတွေ၊ သွေးကြောလတ်တွေ (နှလုံးရှိသွေးကြောမကြီးတွေအပါအဝင်) သွားထိခိုက်စေကာ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (ဥပမာ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ - Coronary Artery Disease) ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှလုံးရောဂါ ဆက်ဖြစ်စေမူ အများဆုံးဖြစ်လာတဲ့ လေးဘက်နာရောဂါမှာလည်း၊ ငယ်စဉ် (၅ နှစ် ၁၅ နှစ် ဝန်းကျင်) လက္ခဏာပြချိန်မှာ (အဆစ်ရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်)၊ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် မကုသနိုင်လျှင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် နှလုံးအဆို့ရှင်တွေ (Aortic Valve၊ Mitral Valve စတာ) ပျက်စီးတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာပါတယ်။
နောက် သတိပြုသင့်တာက အရက်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ အဆီ အလွန်အကျွံ စားသောက်မူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရက် သောက်သုံးသူများလာပြီး၊ အရက်ကို ကြာရှည်သောက်တာကြောင့် ကုရမလွယ်တဲ့ နှလုံးကြွက်သားတွေ ပျက်စီးတာ (Alcoholic Cardiomyopathy) ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောနဲ့ အဆို့တွေထိခိုက်တာကို ခွဲစိတ်ကုသ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပေမယ့် နှလုံးကြွက်သား ပျက်တာကတော့ ခွဲစိတ်ပြင်ပေးလို့မရဘဲ၊ နှလုံးတစ်ခုလုံး အစားထိုးမှရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့်လည်း နှလုံးသွေးကြောတွေ ပျက်စီးစေတာမို့ ဆေးလိပ်အလွန်အကျွံ သောက်သူတွေမှာ သွေးကြောကျဉ်းမကျဉ်း ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်နိုင်ငံမှာလို အဆီများတဲ့ ချိစ် (Cheese) နဲ့ ထောပတ် အများကြီးမစားပေမယ့် ဟင်းနှစ်အဆီနဲ့ အကြော်စာ အစားများလွန်းပြီး၊ နိုင်ငံခြားက အဝင်များလာတဲ့ အသင့်စား ဆီကြော်စာ (ဥပမာ- ကြက်ကြော်၊ ဘာဂါ) ရောင်းတဲ့ဆိုင် (KFC, Burger King စတာ) ‌တွေမှာ အစားများလာတာကြောင့်၊ အဆီများပြီး သွေးကြောပိတ်တဲ့ရောဂါ (Hyperlipidemia) လည်း အဖြစ်များလာနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး သတိပြုရမှာက နှလုံးရောဂါ လက္ခဏာတွေပါ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်လာလျှင် အဓိက အမောမလုံတော့ပါဘူး။ သာမန် အမြင့်တက်ချိန် အခြားပုံမှန်လူတွေလို မတက်နိုင်တာ၊ လမ်းမြန်မြန် မလျှောက်နိုင်တော့တာ၊ အနည်းငယ်လှုပ်ရှားလိုက်လျှင် ချွေးအများကြီးထွက်လာတာ၊ ရင်ဘတ်တင်းကြပ်ပြီး ညှစ်ထားသလိုဖြစ်လာကာ၊ ဆို့ကြပ်ပြီး၊ အောင့်လာတာတွေ ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးတိုးရှိထားသူတွေမှာလည်း သွေးတိုးရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခေါင်းအုံတာ၊ ခေါင်းမကြည်တာတွေကို သတိပြုမိပြီး၊ အထက်ပါ နှလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ပြဿနာက တချို့ လူတွေမှာ (အထူးသဖြင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှာ နေထိုင်သူတွေ) ဒီ သွေးတိုးရောဂါ ရှိနေတာကိုတောင် မသိကြပါဘူး။ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာလည်း မောလာတာ၊ ဖောလာတာ၊ ရင်ထဲ တလှပ်လှပ် ဖြစ်လာတာတွေရှိလာလျှင် နှလုံးရောဂါ ရှိမရှိ အမြန် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဆိုင်ရာအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း က နှလုံးခွဲစိပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ နှလုံးနှင့်သွေးကြောရောဂါ ခွဲစိပ်ကုဌာန အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဌာနမှူး ဒေါက်တာခင်မောင်အေး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ နှလုံးရောဂါ ဖွဈမှာကို စိုးရိမျပွီး၊ နှလုံးရောဂါ ရှိ၊ မရှိ၊ ကွိုတငျ သိခငျြသူတှေ မြားလာနတေယျလို့ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး သတငျးမီဒီယာတှနေဲ့ အငျတာနကျတှကေတဆငျ့ နှလုံးရောဂါဆိုငျရာ အသိဉာဏျ ပိုတိုးလာခြိနျမှာ၊ ဒီရောဂါ ရှိ၊မရှိနဲ့၊ ရှိလာလြှငျလညျး စောစောသိ စောစောကုသခငျြသူတှေ မြားလာနပေါတယျ။ ဆေးရုံတှဘေကျလညျး နှလုံးရောဂါ စတငျအခွခေံလာနိုငျတဲ့ မှေးကငျးစအရှယျကစပွီး စဈဆေးပေးတာတှေ ပိုလုပျလာနပေမေယျ့၊ လှတျသှားတာတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ အသကျအရှယျ ရလာခြိနျမှာတော့၊ မိမိ အနားက လူတှနှေလုံးရောဂါ ဖွဈလာခြိနျမှာ၊ ကိုယျတိုငျလညျး ရှိမရှိ စိုးရိမျတာကွောငျ့၊ နှလုံးရောဂါ ရှိမရှိ ဆရာဝနျတှကေို ပိုမေးလာနပေါတယျ။
ပထမ သတိပွုရမှာက နှလုံးရောဂါ ဆကျဖွဈစနေိုငျတဲ့ သှေးတိုး၊ ဆီးခြိုနဲ့ လေးဘကျနာရောဂါ အခံရှိထားသူတှမှော နှလုံးရောဂါ ရှိ၊မရှိ စဈဆေးဖို့ အရေးကွီးတာပါ။ သှေးတိုးရောဂါရှိလာခြိနျမှာ နှလုံးကို ဒဏျပိပွီး၊ နှလုံးကွီးလာကာ၊ နှလုံညှဈအားကပြွီး၊ နှလုံးအားပွတျရောဂါ (Left Ventricular Failure) ဖွဈလာနိုငျကာ၊ ကွိုမသိထားရငျ နှလုံးဆို့ကွပျခြိနျ ဆေးရုံပို့ရမှ နောကျကပြွီး သိတတျကွပါတယျ။ အဖွဈမြားလာတဲ့ ဆီးခြိုကလညျး ဆီးနဲ့ပတျသကျသလိုဖွဈပမေယျ့ အဓိက သှေးကွောမကွီးတှေ၊ သှေးကွောလတျတှေ (နှလုံးရှိသှေးကွောမကွီးတှအေပါအဝငျ) သှားထိခိုကျစကော၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ (ဥပမာ၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ - Coronary Artery Disease) ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ နှလုံးရောဂါ ဆကျဖွဈစမေူ အမြားဆုံးဖွဈလာတဲ့ လေးဘကျနာရောဂါမှာလညျး၊ ငယျစဉျ (၅ နှဈ ၁၅ နှဈ ဝနျးကငျြ) လက်ခဏာပွခြိနျမှာ (အဆဈရောငျ၊ လညျခြောငျးနာ၊ ရငျဘတျအောငျ့)၊ ကွပျကွပျမတျမတျ မကုသနိုငျလြှငျ နောကျဆကျတှဲအဖွဈ နှလုံးအဆို့ရှငျတှေ (Aortic Valve၊ Mitral Valve စတာ) ပကျြစီးတဲ့ရောဂါတှဖွေဈလာပါတယျ။
နောကျ သတိပွုသငျ့တာက အရကျ၊ ဆေးလိပျနဲ့ အဆီ အလှနျအကြှံ စားသောကျမူပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အရကျ သောကျသုံးသူမြားလာပွီး၊ အရကျကို ကွာရှညျသောကျတာကွောငျ့ ကုရမလှယျတဲ့ နှလုံးကွှကျသားတှေ ပကျြစီးတာ (Alcoholic Cardiomyopathy) ဖွဈလာတတျပါတယျ။ နှလုံးသှေးကွောနဲ့ အဆို့တှထေိခိုကျတာကို ခှဲစိတျကုသ ပွငျဆငျပေးနိုငျပမေယျ့ နှလုံးကွှကျသား ပကျြတာကတော့ ခှဲစိတျပွငျပေးလို့မရဘဲ၊ နှလုံးတဈခုလုံး အစားထိုးမှရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဆေးလိပျသောကျတာကွောငျ့လညျး နှလုံးသှေးကွောတှေ ပကျြစီးစတောမို့ ဆေးလိပျအလှနျအကြှံ သောကျသူတှမှော သှေးကွောကဉျြးမကဉျြး ပုံမှနျစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အနောကျနိုငျငံမှာလို အဆီမြားတဲ့ ခြိဈ (Cheese) နဲ့ ထောပတျ အမြားကွီးမစားပမေယျ့ ဟငျးနှဈအဆီနဲ့ အကွျောစာ အစားမြားလှနျးပွီး၊ နိုငျငံခွားက အဝငျမြားလာတဲ့ အသငျ့စား ဆီကွျောစာ (ဥပမာ- ကွကျကွျော၊ ဘာဂါ) ရောငျးတဲ့ဆိုငျ (KFC, Burger King စတာ) ‌တှမှော အစားမြားလာတာကွောငျ့၊ အဆီမြားပွီး သှေးကွောပိတျတဲ့ရောဂါ (Hyperlipidemia) လညျး အဖွဈမြားလာနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နောကျဆုံး သတိပွုရမှာက နှလုံးရောဂါ လက်ခဏာတှပေါ။ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ ဖွဈလာလြှငျ အဓိက အမောမလုံတော့ပါဘူး။ သာမနျ အမွငျ့တကျခြိနျ အခွားပုံမှနျလူတှလေို မတကျနိုငျတာ၊ လမျးမွနျမွနျ မလြှောကျနိုငျတော့တာ၊ အနညျးငယျလှုပျရှားလိုကျလြှငျ ခြှေးအမြားကွီးထှကျလာတာ၊ ရငျဘတျတငျးကွပျပွီး ညှဈထားသလိုဖွဈလာကာ၊ ဆို့ကွပျပွီး၊ အောငျ့လာတာတှေ ဖွဈလာလရှေိ့ပါတယျ။ သှေးတိုးရှိထားသူတှမှောလညျး သှေးတိုးရောဂါလက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ ခေါငျးကိုကျတာ၊ ခေါငျးအုံတာ၊ ခေါငျးမကွညျတာတှကေို သတိပွုမိပွီး၊ အထကျပါ နှလုံးရောဂါလက်ခဏာတှကေို ပိုသတိပွုသငျ့ပါတယျ။ ပွဿနာက တခြို့လူတှမှော (အထူးသဖွငျ့ ဝေးလံခေါငျဖြားဒသေမှာ နထေိုငျသူတှေ) ဒီ သှေးတိုးရောဂါ ရှိနတောကိုတောငျ မသိကွပါဘူး။ အရကျနဲ့ ဆေးလိပျသောကျသူတှမှောလညျး မောလာတာ၊ ဖောလာတာ၊ ရငျထဲ တလှပျလှပျ ဖွဈလာတာတှရှေိလာလြှငျ နှလုံးရောဂါ ရှိမရှိ အမွနျ စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
ဒီရောဂါဆိုငျရာအကွောငျး ပိုမိုသိရှိနားလညျနိုငျဖို့ ကိုဝငျးမငျး က နှလုံးခှဲစိပျ အထူးကုဆရာဝနျကွီး၊ နှလုံးနှငျ့သှေးကွောရောဂါ ခှဲစိပျကုဌာန အငွိမျးစားပါမောက်ခ ဌာနမှူး ဒေါကျတာခငျမောငျအေး ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးတငျပွထားပါတယျ။